Injineeriyadda - Page 2 - Geofumadas
Xirfadaha in Mashruuca Rayidka ahi uu ka helo mulkiilaha dhismaha
Marka la falanqeeyo sidii ay ula horumarinta mowduucan macaamiloon, waxaan si degdeg ah u yimaadeen inay u fikiraan isbuucii ugu horeysay aan sida Injineer madani ah; ka dib xaflad qalin jabin ah waxaan go'aansaday inaan tago oo booqan ayeeyooyinka aan la fikirka ah ee ku riyaaqayaa dhowr maalmood ee xasilloon. Runta waxa ay ahayd in maalin maalmaha ka mid, waxaan helay waano ka dib markii ...
Marka la dhammeeyo xirfadda iyo qalinjabinta injineerka, dhammaystirka mid ka mid ah ujeedooyinka arday kasta oo dejiya marka ay bilaabaan waxbarashadooda jaamacadeed ayaa la isku darayaa. Xitaa ka sii muhiimsan haddii xirfad-qaadidu ay tahay meesha ay ka mid tahay dareenka. Injineernimada mihnadeed waa xirfad sanadka ka dambeysa kiciyay kumanaan ...
awoodaha New falanqaynta sare dhismaha la taaban karo, design iyo waraaqo xal Bentley Systems, ayaa maanta ku dhawaaqay in lagu daro iibka ah ee dukumentiyada software iyo naqshadda dhismaha la taaban karo ku salaysan ee Mumbai Company S-Cube Futuretech Pvt. Ltd. Intaa waxaa dheer ee Codsiyada S-Cube Futuretech waxay ballaarineysaa waxyaabo gaar ah oo Bentley ah ...
Horumarinta qaabeynta habka dhismaha macluumaadka dhismaha (BIM) wuxuu ahaa mawduuc is-dhaafsan oo ah Shirkii Kaabayaasha ee sanadlaha ah, oo lagu qabtay Oktoobar magaalada Singapore. Inkasta oo xisaabtaydii Twitter-ka ay si caqligal ah u afduubtay hirgelinta # xII2017, hashtag # Socdaal Waqtigaan ...
Allplan: 4 2017 balanqaaday bilowgii cusub
Allplan wuxuu soo bandhigaa xalka BIM Allplan 2017-1: Wakhti dheeraad ah ee muhiimka ah - Horumarin badan oo loogu talagalay maaraynta maaraynta shaqada iyo qaabeynta 3D. - Badbaadinta xogta la badelay iyadoo la adeegsanayo IFC4. - Xulashada ballaaran ee nidaamyada wadajirka ah ee loo yaqaan 'Allplan' waxay soo bandhigaysaa hagaajin cusub iyo horumarin ah xalka BIM Allplan 2017 ee dhismayaasha iyo ...
BIM - Dunida oo ku riyootay 20 sano ka hor
20 sano ka dib, waxaan kaliya oo aan iskaashi u yeelan karaa BIM iyada oo loo marayo horumarinta matalaada wakhtigaas ka baxaya miiska sawirka iyo waraaqda raadinta ee faylasha CAD. Taasi waxay ahayd mid soo jiidasho leh, iyada oo tixgelisay in ay ka timid kartoon iyo xisaabiye xisaabiye + xisaabiye + Lotus 123. Waxaan u maleynayay inay tahay wax aad u wanaagsan in la aamino ...
13 sawiro taariikhi ah dadaalka aadanaha
Sannadka 2015 ayaa dhammaaday. Si aan u dabaaldego, waxaan kuu soo qaadannaa dhowr sawir oo taariikh ah oo ina xusuusiya in wakhtigu uusan dhaafin. 129 habnololeedka Hindenburg Zeppelin nooca airship, halligay dab halka caga New Jersey 6 1937 May. Shilka ayaa sababay geerida 36 ...
Ka soo cararida Chapo Guzmán, oo ah shaqo ah injineer sare
Yaa sameeyay shaqo sahanka sugnan ah, waxaan la soconaa kakanaanta ee anshaxa this, qaddar matalaya labaad ee yaqiin in 1,500 mitir iyo dhammaan tallaabooyinka ammaanka in la qaado. Ka mid ah xabsiga El Altiplano iyo goobta halkaas oo dhismaha uu ku yaalaa on site ...
Ku shaqeynta LiDAR waxay noqon kartaa mid sax ah marka loo eego taayirrada caadiga ah? Haddii ay yareyso waqtiyada, boqolkiiba sidee? Waa imisa kharashka? Marar dhif ah ayaa isbeddelay. Waxaan xusuustaa markii uu Felipe, sahamiyihii oo shaqadii sameeyey, wuxuu la yimid boggaga 25 ee bogagga iskutallaabta si uu u abuuro ...
Isku Dayay 2014 Finalka
The November 6 waxaa lagu qaban doonaa London, abaalmarinta sannadlaha ah ee Abaalmarinta Lagu Sameeyo. Taariikhdaas waxay ku habboontahay shirarka ku saabsan teknoolajiyada lagu isticmaalo maareynta kumbuyuutarka smart, oo noqon doona Talaadada, Arbacada iyo Khamiista. Halkan, kuwa naga mid ah ee ka qayb galaya Shirka waxay awoodi doonaan inay kaqaybqaataan falanqaynta 6 xiiso leh, Aragtida mustaqbalka, ...
Bentley's wax soo saarka ugu fiican waa Microstation, iyo qaababka toosan ee laanta kala duwan ee geo-injineerka iyadoo xoogga la saarayo naqshadeynta madaniga, warshadaha, dhismaha iyo dhismaha warshadaha. ProjectWise waa bentley's wax soo saarka labaad ee isku dhafan maamulka maareynta iyo isdhexgalka kooxda shaqada; iyo dhawaan ayaa la sii daayay ...
Koorsada: Falanqaynta iyo Naqshad Dhismaha Hirgelinta Dhismaha Dhismaha
maalin 7 ee March qaban doonaan seminar ah online taas oo bulshada ee aalada falanqaynta dhismaha iyo naqshadda dhismayaasha magaalooyinka qalab la diyaarin doonaa: System Dhismayaasha STAAD.Pro RAM STAAD.Foundation Advanced xusuusan kulan STAAD markii ay ahayd version lagu soo rogay DOS, imika marka la eego sida ...
Baridda CAD / GIS, Engineering
Taas oo dib u soo celisa GEO5 qaybta 15
Dhowr sano ka hor ayaan dib u eegay barnaamijkan, kaas oo aan u maleynayo inuu ugu fiican yahay farsamooyinka sagxadda. Toddobaadkan ayaa naga tagay si aad u xiiso badan oo loo soo bandhigay version cusub ee GEO5, kaas oo aan rumaysanahay in ay aqbali doonaan qayb ka mid ah dadka isticmaala qalabkan, taas oo habka ay u taagan tahay ...
Impression First: Dell Inspiron Mini 10 (1018)
Haddii aad ka fekereyso iibsashada buugga Netbook, waxaa dhici karta in Dell 10 mini uu noqon karo ikhtiyaar. Qiimaha qiimaha US $ 400, aad ayuu uga hooseeyaa asalka Aser Aspir ee asalka ah. Waa wax ka badan ama ka yar (ka yar wax ka badan) u dhigma Acer D255-2DQkk, oo cadeynaya in version (1018) horayba ...